Our News Crewमहानवमीका दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर हनुमानढोकामा मात्र हैन अन्त कहा कहा छन् ? - Our News Crew
महानवमीका दिन मात्र खुल्ने तलेजु भवानीको मन्दिर हनुमानढोकामा मात्र हैन अन्त कहा कहा छन् ?
२०७८ आश्विन २८, बिहीबार १५:११
हरेक बर्ष महानवमीका दिन मात्र सर्वसाधारणका लागि खुल्ने हनुमानढोका स्थित तलेजु मन्दिरमा विहान देखि दर्शनार्थीहरुको भीड लागेको छ । गत बर्ष कोरोना महामारीको जोखिमका कारण बन्द नसकेको मन्दिर यस बर्ष भने आवश्यक सचेतना अपनाई खुला गरिएको हो ।
हनुमानढोका दरबारमा रहेको बर्षमा एकपटक महानवमीका दिन मात्रै सर्वसाधारणका लागी खुल्ने तलेजु मन्दिर बिहिबार बिहानैबाट खुला गरिएको छ । तलेजु मन्दिर बर्षमा एकपटक मात्रै खुल्ने भएकाले भक्तजनहरुको भने बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । तलेजु मन्दिर परिषदमा महानवमीको अवसरमा ५४ वटा राँगा र ५४ वटा बोका बलि दिने मल्लकाल देखि नै चलेको चलन छ ।
गत बर्ष कोरोनाका कारण खल्न नसकेको तलेजु मन्दिर यस बर्ष भने कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाई खुला गरिएको थियो । गत बर्ष पुजा गर्न नपाएका भक्तजनहरु यस बर्ष भने निकै हर्षउल्लासका साथ सहभागिता भएका थिए । बिहान ५ बजेबाट सर्वसाधारणका लागी खुला गरिएको मन्दिर बेलुकि ८ बजेसम्म खुल्ले बताईएको छ ।
तलेजु भवानीको दर्शन गर्न पाए रोगव्याधिबाट मुक्त भई पारिवारिक सुख–समृद्धि मिल्ने जनविश्वास पनी रहेको छ । तलेजु मन्दिर उपत्यकामा मात्र नभई उपत्यका बाहिर नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा लगाएका जिल्लामा पनी अवस्थित रहेको छ ।